SellerSmile: Nei Uchifanira Kupa Yako Ecommerce Tsigiro Chikwata | Martech Zone
SellerSmile: Nei Uchifanira Kupa Yako Ecommerce Tsigiro Chikwata
Chipiri, Mbudzi 2, 2021 Chipiri, Mbudzi 2, 2021 Douglas Karr
Pakaitika denda uye vatengesi vakavharwa, hazvina kungokanganisa zvitoro. Zvakakanganisa ketani yese yekugovera iyo yakadyisa vatengesi ivavo zvakare. Zvangu dhijitari shanduko yekubvunza kambani iri kushanda nemugadziri izvozvi kuti avabatsire mukuvaka Ecommerce uye Martech stack yekutsigira a yakananga-kune-vatengi inodonhedza bhizinesi. Iro ipurojekiti yakaoma sezvo takakwanisa kushanda nzira yese kubva mukutsvagisa mhando nekugadzira, kusvika kukubatanidza zvinhu.
Kuti brand itsva ipinde muindastiri iyi hazvisi nyore. Takavayambira kuti vanofanirwa kuve nemaitiro mashoma epamusoro munzvimbo:
Products - uyu ndiye musiyanisi wavo kubvira vanga vachigadzira nekugadzira fashoni kwemakumi emakore. Ivo vanotoziva izvo zvinotengesa pamwe neinotevera chigadzirwa mitsara inoda kuburitswa.
Nhoroondo yevashandi - Isu tinoziva kuti yavo ecommerce kuita inofanirwa kuve yakanyanya kunaka, saka takaisa saiti pa Shopify Uyezve uye yakashandiswa yakanyatsotsigirwa uye yakagadziridzwa Shopify theme kushanda kubva.
Kutumira uye Kudzoka - kutumira kwemahara kwakanaka, asi kuve neyakagadzirirwa-yakagadzirwa bhegi rekudzoka kwechinhu chinoda kudzoserwa kwakakosha.
Mabatiro evatengi - chekupedzisira, asi chisiri chidiki, kuve nechikwata chekutsigira chekutarisa email, foni, uye social media kuti zvinhu zvigadzirire mutengi zvichave zvakakosha.
Mutengi uyu haana brand yakasimbiswa, saka imwe neimwe yeaya mazano anofanirwa kutangwa panguva imwe chete. Izvo zviri nyore kune zvigadzirwa, ruzivo, uye kutumira… asi unotangisa sei timu yebasa revatengi? Zvakanaka, iwe unofanirwa kuzviburitsa pachena.
Sei Kutsigirwa Kwekunze?
Zvikwata zvekutsigira zvekunze zvine huwandu hunoshamisa hwechiitiko icho chiri kuwedzera kukosha kune yako brand. Mabhenefiti ekunze kwechikwata chako anosanganisira:
Deredza mari yekuhaya vashandi kana timu yeVAs. Flexible uye tsika-yakagadzirirwa mitengo. Hapana chisungo, hapana mari yakavanzika.
Kuvhara pasina kunetseka mazuva manomwe pasvondo. Kuwanikwa kune ino scalable timu yevashandi vevatengi nyanzvi pasina kuhaya, kudzidzisa uye kubata.
Kudza kutengesa kwako neruzivo rwakakwana rwemutengi ruzivo rwunoziviswa nedata kubva kune mutengi mhinduro.
Vatengi vako vanogashira yakanakisa online kutenga ruzivo kubva kuchikwata chemitauro yakawanda ine yakasarudzika girama uye nekukurumidza mhinduro nguva.
MutengesiSmile ndiye mutungamiri mune yakaburitswa ecommerce rutsigiro indasitiri. Ivo vanotsigira ndeye Shopify Partner uye zvakare vanotsigira misika inosanganisira Amazon, Overstock, Etsy, Ebay, Sears, Walmart, uye Newegg. Rutsigiro rwekutanga runosanganisira:
Email Support -Kunyangwe zvaunoda zvekuvhara zviri 7-mazuva pasvondo, kupera kwevhiki kana zororo, SellerSmile inopa vatengi vako rutsigiro pamisika yese ye-e-commerce uye zvitoro zvewebhu.
Reputation Management -Negative veruzhinji wongororo uye makomendi chikamu chakajairwa kuita bhizinesi pamhepo asi zvisingatarisirwe zvinoshoropodza zvinogona kupararira nekukurumidza. Kuzivikanwa kwavo manejimendi masevhisi anovimbisa kuti brand yako mhinduro inotungamirwa.
Live Chat Support -Kupa live chat rutsigiro kune vashanyi vewebhusaiti yako yakakosha yemakwikwi mukana unovhara gaka uye unovaka kuvimbana pakati pako nevateereri vako kuburikidza nekukurumidza, nerubatsiro rubatsiro kubva kunyanzvi dzebasa.
Uyezve, SmellerSmile inogonawo kupa:
Kushuma uye Kuonana -Yakagadzirirwa kushuma pamwedzi uye nguva nenguva kufona neakaunti yako maneja kuti utarise zvakakwirira, zvinotora, uye zvinogoneka kuona.
Mutengi Service Consulting -Uri kutsvaga kuvandudza timu yako yekutsigira? SellerSmile inobatana kuti iongorore yako iripo seti, zvinyorwa uye marongero uye kugadzira chirongwa chekubudirira.
Social Media Support -Nharaunda manejimendi kupa vatengi chiitiko chisina musono paFacebook, Twitter, Instagram, LinkedIn nezvimwe.
FAQ Management - Ita kuti zvive nyore kuwana mhinduro dzechokwadi kuMibvunzo Inowanzo bvunzwa nekukurumidza. Yako yekuzvishandira yeruzhinji mabhesi ndiko uko vatengi vanotanga kuenda kunotsvaga rubatsiro rwavanoda.
Ongorora Kushuma -MutengesiSmile anogona kurongedza magadzirirwo ako echigadzirwa zuva rega rega kuratidza mikana yakakosha yekudzokororwa kwechigadzirwa uye zivobase kuwedzera.
Kana iwe uchida kutanga rutsigiro rwevatengi kutyaira zvirinani mutengi ruzivo uye zvimwe kutengesa:
Edza SellerSmile Yemahara kwemazuva manomwe
Kuzivisa: Ndiri kushandisa yedu yakabatana link ye MutengesiSmile munyaya ino.
Tags: amazon rutsigirovatengi vanozivakasitoma rutsigiroecommerce email rutsigiroecommerce rutsigiroemail rutsigiroEtsy rutsigiroNewegg rutsigirooutsource ecommerce rutsigirooutsource rutsigiromukurumbira manejimendimutengesishopifyShopify pamwe nerutsigiroShopify rutsigiroShopify themezvekutengeseranapasocial media vatengipasocial media ecommercemagariro enhau manejimendipasocial media mukurumbira manejimendithemeforestWalmart rutsigirowokiee
Nguva Yekutsvagisa, Ongorora, uye Disavow Backlinks Kuvandudza Kutsvaga Zvinzvimbo
Hei DAN: Sei Izwi reCRM Rinogona Kusimbisa Hukama Hwako Hwekutengesa uye Kukuchengeta Wakachena